Gareen shororkeessaa ABUT kan haleele reeffi jumlaa lammiilee nagaa argameera. Garichi godina Gondar Kaabaa aanaa Dabaat ganda Cinaa fi Taklahaayimaanoot keessaatti lammiilee nagaa hedduu haleeluusaa Biiroo kiminikeeshinii naannoo Amaaraa ibseera. Daayreektarri olaanaan biirichaa obbo Gizaachoo Mulunaah, gareen weerara ABUT halleellaa sukkanneesaa lammiilee nagaarratti raawwateera jedhan. Gareen kun mangoodduuta mana jireenyaasaanii keessaa turan, daa’immanii fi dubartootaarratti […]
Huursootti Loltoonni Bu’uraa marsaa 3ffaaf Leenji’aa turan eebbifamaa jiru jedhame.
September 5, 2021 topzena10
Ministeera Raayyaa ittisa Biyyaatti Jiddugalli Leenjii Loltummaa Huursoo Loltoota Bu’uraa marsaa 3ffaaf Leenjisaa ture eebbisaa jira. Sirna eebba kana irratti ajajaan waliigalaa Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Ministirri muummee FDRI dooktar Abiy Ahimad, Itamajoor shumiin Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa akkasuma Itti aanaan Ministira Muummee fi Ministirri dhimma alaa FDRI obbo Dammaqaa Mokonniin argamaniru. Haaluma […]
“Gareen Shororkeessaa ABUT Garee Kallattii Sadiin Hiriirsee Guutuumma Guutuutti Barbadaa’era”
September 5, 2021 September 5, 2021 topzena10
Humni garichaa Jeneraal Migbaayiin durfamu Armii 1ffaa jedhamu guutuumma guutuutti barbadaa’uu Letanaal Jeneraal Baacaa Dabaleen ibsaniiru. L/J Baacaa Dabalee raawwii diqamaa raayyaa ittisa biyyaa fi haala waqtaawaa biyyaa hordofee ibsa laataniiru. Humni garichaa Jeneraal Migbaayiin durfamu Armii 1ffaa jedhamu naannoo Humaaraan Dabarqii fi Dabaat kutuun Gondaariin qabachuuf ture guutuummaa guutuutti barbadaa’uu himaniiru. Gareen shororkeessaa ABUT […]
Adoolessa 1 hanga Hagayya 27, 2013tti meeshaaleen Kontiroobaandii Birrii miiliyoona 44 olitti tilmaamamu to’atamuu Ministeerri Galiiwwanii beeksiise. Meeshaaleen kunneen gara alaatti ba’uu fi biyya keessa galuuf wayita socho’an to’atamuu ibsameera. Meeshaaleen seeraan ala gara biyya keessa galuuf turan Birrii miiliyoona 38 fi kuma dhibba 9 fi kuma 64 olitti tilmaamamu yoo ta’atamu, kan gara alaa ba’uuf […]
Milkaa’inni hojii Ashaaraa Magariisaatiin argame hojii hundaan mirkaneessu akka dandeenyu kan mul’isudha -Dooktar Abiy
September 2, 2021 September 5, 2021 topzena10
‘Birrii 100 lammii koof ‘ mata duree jedhuun sagantaan galii walitti qabuu sadarkaa biyyaatti adeemsifamuuf ta’uu waajjirri liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa beeksise. Waajjira liigii dargaggoota paartii badhaadhinaatti hoogganaan —-damee siyaasaa Yilmaa Tarrafaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Ibsa Kanaan sagataa galii walitti qabuu ‘birrii 100 lammii koof’ jedhuun warraaqsi dargaggootaa galii walitti qabuuf ni taasifama jedhan. […]
“Rakkoo nageenyaa Itoophiyaatti uumamaa jiruuf sababoota sadiitu jiru” – Obbo Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir
August 14, 2021 August 14, 2021 topzena10
Waasihun Takileetiin Finfinnee: Rakkoo nageenyaafi raafama siyaasaa Itoophiyaa mudataa jiraniif hudhaaleen sadii akka sababaatti kan ka’an ta’uu jaarsi araaraafi nageenyaa akkasumas ogeessi seeraa Obbo Abbbaa Biyyaa Abbaa Joobir ibsan. Akka ibsasaaniitti: – Murna walqixxummaatti hinamanneefi natu sii beeka jedhutu jira. Murni kun hariiroofi tokkummaa sabootaafi biyyaaf balaadha. Ilaalchi kun balaafamaa waan ta’eef mootummaan cimsee irratti hojjechuu […]